इंडियाना स्कूल कर्पोरेसनहरू र चार्टर स्कूलहरू द्वारा उपलब्ध गराइएको खर्च डाटा प्रयोग गरेर, इन्डियाना शिक्षा विभागले यी दृश्यहरू वित्तीय पारदर्शिता बढाउन र इन्डियाना स्कूल भवनहरूमा खर्चको वैध तुलनाको समर्थन गर्न यी दृश्यहरू प्रस्तुत गर्दछ। यी डाटाले संघीय प्रत्येक विद्यार्थी सफल कानूनको आवश्यकताहरू र इन्डियाना कोड २०--4२.-3--3-7 को प्रावधानहरू पूरा गर्दछ। (डाटा स्रोत: FY 2019)
आर्थिक वर्ष २०१ for मा प्रति विद्यार्थी कुल खर्च कति भयो?
विद्यार्थी प्रति कुल खर्च सबै राज्य, स्थानीय, र संघीय खर्चहरू प्रतिबिम्बित गर्दछ इन्डियाना स्कूल निगमहरू र चार्टर स्कूलहरू द्वारा स्कूल वित्त कार्यालयमा रिपोर्ट गरिएको। जुलाई १ देखि जून 30० सम्मको कुल व्ययहरू अक्टोबर १ मा स्कूलमा भर्ना भएका विद्यार्थीहरूको गणनाद्वारा विभाजन गरिएको छ।
[एन्टिट_टाइप] को लागि कुल खर्च के हो?
कुल खर्चमा निर्देशात्मक र परिचालन खर्चहरू समावेश छन्। यी खर्चहरू सबै राज्य, स्थानीय, र संघीय निर्देशात्मक र परिचालन खर्च प्रतिबिम्बित गर्दछ शिक्षा शिक्षा विभाग को रिपोर्ट।
स्कूलमा निर्देशात्मक उद्देश्यको लागि प्रयोग गरिएको खर्चको प्रतिशत।
निर्देशात्मक साझा व्यय
विद्यालयहरूमा साझेदारी गरिएको अनुदेशात्मक उद्देश्यहरूको लागि खर्चको प्रतिशत।
अन्य निर्देशात्मक खर्च
अन्य निर्देशात्मक कोटीहरूमा शामेलगत उद्देश्यहरूको लागि व्ययको प्रतिशत।
यातायात, रखरखाव, वित्तीय सेवाहरू, र केन्द्रीय कार्यालयको लागि खर्चको प्रतिशत।
परिचालन साझा व्यय
विद्यालयहरूमा सञ्चालन उद्देश्यका लागि प्रयोग हुने खर्चको प्रतिशत।
[एन्टिट_टाइप] को लागी बाह्य खर्चहरू के हुन्?
बहिष्कृत व्ययहरू कुनै पनि खर्चहरू निर्देशात्मक वा अपरेशनल हुँदैनन् र कुल खर्च र प्रति / विद्यार्थी खर्चको गणनामा समावेश हुँदैन।
व्यय व्यय: खाद्य सेवा
स्टाफ र विद्यार्थीहरूलाई खाना सेवाहरू प्रदान गर्न प्रयोगमा गरिएको व्यय खर्चको प्रतिशत।
व्यय व्यय: अन्य
कुनै पनि गैर खाना सेवा खर्च व्यय। यसमा debtण, लीज भाडा, वयस्क शिक्षा, फाउण्डेशनलाई अनुदान, छात्रवृत्ति, सामुदायिक सेवाहरू, र सुविधाहरू अधिग्रहण र निर्माण / पूँजी उपकरणहरूका लागि खर्च समावेश छ।
[अस्तित्व_प्रकार] को लागि व्ययका स्रोतहरू के हुन्?
राज्य / स्थानीय कोष
प्रत्येक विद्यार्थी सफल कानून (ESSA) विस्तृत वित्तीय खर्च रिपोर्ट हेर्नुहोस्। https://www.doe.in.gov/finance/school-fin वित्तीय-report